Yonke i-condo yangasese indawo enhle umbhede omkhulu - I-Airbnb
Yonke i-condo yangasese indawo enhle umbhede omkhulu
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Ellie
Jabulela ukuhlala kwakho e-Springfield, IL nayo yonke i-condo yakho yangasese. Uzoba negumbi lakho lokulala elivulekile, igumbi lokuphumula, indawo yokudlela, negumbi lokugezela elinombhede omkhulu (oqinile). Kukhona i-patio emangalisayo ngemuva enendawo enkulu kakhulu ongayijabulela. Itholakala ku-Westside yase-Springfield engaphansi kwamamayela angu- ukusuka emigwaqweni emikhulu/imizila ingathola okuningi kakhulu noma kuphi e-Springfield phakathi nemizuzu engu-10-15. Indawo enokuthula nokuzola kakhulu kodwa isenezindawo eziningi zokudlela, izindawo zokuthenga, nama-Starbucks aseduze.
Ngaphambi kwanoma yini enye nangenxa yokuthi sibe nezinkinga ezimbalwa - Sicela ukhumbule ukuthi sihlose ukuba ama-Airbnb ethu athule. Siphila endaweni enhle enokuthula futhi sithanda omakhelwane bethu. Asizivumeli izivakashi noma izivakashi ezingafakiwe ekubhukheni kokuqala futhi asiwavumeli amaphathi. Sicela uhloniphe lo mthetho, ubaluleke kakhulu. Uma lokhu kungekhona lokho okufunayo, i-Springfield inamanye ama-Airbnb amaningi amahle avumela amaphathi namaqembu amakhulu, lokhu akuyona nje isethingi yayo.
Lapho uthumela isicelo sicela ukuthi ufake zonke izivakashi ezizoba nawe nemisho embalwa ngawe nesizathu sohambo lwakho.
Ngenxa yezinkinga zangaphambilini, uma umusha ku-airbnb, unokushiwo abanye okungu-0, futhi ubhukhe phakathi nosuku olulodwa noma ngosuku olufanayo, singacela imininingwane eyengeziwe mayelana nohambo lwakho, ucingo, noma sihlangane lapho ungena.
Sicela uzihlanze lapho udla futhi usebenzisa izitsha.
Lena yi-duplex eseceleni (amakheli amabili ahlukene ahlukaniswe ngodonga phakathi). Siphila ngakolunye uhlangothi futhi sinengane nenja. Siyazibheka njengabantu abanokuthula, kodwa cishe uzosizwa ngezikhathi ezithile. Uma unemibuzo noma ukukhathazeka ngomsindo ovela kithi ngaphambi kokubhukha sicela usazise.
Azikho izinto zokupheka, umshini wekhofi, noma i-toaster etholakalayo. Kukhona ama-tvs ahlakaniphile, kodwa azikho iziteshi zendawo noma ithelevishini ye-cable. Siyakwamukela ukuletha okungokwakho.)
4.74 · 91 okushiwo abanye
Enye yezindawo engizithandayo e-Springfield. Indawo enhle futhi abantu bathule futhi banobungane. Phakathi nebanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya ezindaweni zokudlela nasezitolo zokuthenga.